အသံလှူကြတော့မယ်ဆိုရင် – For her myanmar
Posted on February 25, 2018 Author Wai Zin	Comment(0)
ကိုယ့်ရဲ့အားလပ်ရက်မှာ အသံလှူခြင်းနဲ့ ကုသိုလ်ယူချင်သူ ယောင်းတို့အတွက်
အသံလှူတယ်ဆိုတာ တခြားကိုယ်တွင်း အင်္ဂါတွေ လှူသလို အသံအိုးကြီးပါ ဖြုတ်ပေးလိုက်ရမှာလားပေါ့ 😀 မဟုတ်ပါဘူး။ အသံလှူတယ်ဆိုတာက မျက်လုံးမမြင်ရတဲ့ ကလေးတွေကို သူတို့ သိသင့်သိထိုက်တဲ့ စာလေးတွေ ဥပမာ ပုံပြင်တွေ၊ အကျိုးရှိစေမယ့် ဗဟုသုတရစေမယ့် ဝတ္ထုတွေ ဖတ်ပြီး အသံသွင်းထားရတာမျိုး ရှိသလို ကျောင်းတက်နေဆဲ မျက်မမြင် ကလေးငယ်တွေအတွက်လည်း ကျောင်းစာအုပ်ထဲက စာတွေကို အသံသွင်းပေးခဲ့ရတာပါ။ အရှင်းဆုံးပြောရရင် ကိုယ်စာဖတ်ပြတာကို အသံဖမ်းထားတာပေါ့။ တွေးကြည့်ရုံနဲ့တင် ပီတိဖြစ်စရာနော်..
ကိုယ်တွေ အားလပ်ရက်တွေရတယ် ပိတ်ရက်တွေရှိတယ်။ ပရဟိတအဖွဲ့တွေထဲလည်း ပိုက်ဆံတော့ လှူဖြစ်တယ် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဖို့အချိန်မပေးနိုင်ဘူး။ တကယ်တမ်း ပရဟိတလုပ်ရတာလည်း ဝါသနာပါတယ်ဆိုရင် အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို အချိန်တွေလည်း အများကြီးပေးစရာမလိုဘဲ အားလပ်ချိန်အနည်းငယ်လောက် ပေးလိုက်ရုံနဲ့ အခြားသူတွေအတွက် အများကြီး အကျိုးရှိနိုင်မယ့် အသံလှူလို့ရတဲ့ နေရာလေးတွေကို ယောင်းတို့ဆီ လမ်းညွှန်ပေးပါရစေနော်။
အဓိက ကတော့ ကိုယ်အားတဲ့ရက်ကို အသံသွင်းတာဝန်ခံဆီ ဖုန်းဆက် စာရင်းပေးထားတာက ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ဘယ်ရက် ဘယ်အချိန်အားတယ် ဘယ်နှစ်နာရီလောက်အချိန်ပေးနိုင် လဲပေါ့။ တခြားလူတွေလည်း အသံလှူကြတော့ အချိန်ခွဲနိုင်အောင်လို့ပါ။ဘယ် ရက် ဘယ်အချိန် လာလှူမယ်ဆိုပြီး စာရင်းပေးထားလိုက်ရင် ရပါတယ် တစ်ခြား လှူသူတွေလည်းရှိတော့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အချိန်ကြိုညှိပြီးမှ သွားတာ ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
အဓိက ကတော့ စာဖတ်တတ်ရင် ရပါပြီ။ မျက်မမြင်ကလေးတွေ နားထောင်ဖို့အတွက် စာအုပ်တွေကို မြင်ရတဲ့ကိုယ်က ကြားကနေ ဖတ်ပေး ရတာပါ။ ကိုယ်ဖတ်ပြတဲ့အသံကို အသံဖမ်းထားပြီး ကျောင်းသားတွေကို ပေးနားထောင်တာပါ။ အကြားအာရုံကိုပဲ အားကိုးရတာဆိုတော့ ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန် ဖတ်ပြသွားရင် ရပါပြီ။အသံနေ အသံထားနဲ့ဖတ်တော့ ပိုနားထောင်ကောင်းတာပေါ့။
ကိုယ်ဖတ်ပြချင်တဲ့စာအုပ်လည်း ယူသွားလို့ရပါတယ်။ ပေးဖတ်စရာ စာအုပ်မရှိလည်း ကျောင်းမှာရှိပြီးသား စာအုပ်တွေကို ဖတ်ပြပြီး အသံသွင်းလို့ရပါတယ်။ တစ်ဘက်စွန်းရောက်လွန်းတဲ့ စာအုပ်တွေကိုတော့ မဖတ်တာ ကောင်းတာပေါ့။ မဂ္ဂဇင်း ၊ ဆောင်းပါး ၊ ဝတ္ထုတို ၊ ဝတ္ထုရှည် အကုန်ဖတ်ပြလို့ရပါတယ်။ကိုယ့်မှာ ဖတ်ပြပြီးသား စာအုပ်ဆို တစ်ခြားစာအုပ်ဖတ်ပြလို့ရပါတယ်။ သတိထားရမှာကတော့ ဘာပဲဖတ်ဖတ် ဖြည်းဖြည်း မှန်မှန်ဖတ်တတ်ဖို့ပါပဲ။ ဒါကလည်း သူတို့တွေ အတွက်ပိုအဆင်ပြေအောင်လို့ပါ။ တစ်အုပ်လုံးပြီးအောင် မဖတ်ပေးနိုင်လည်း ကိုယ်အချိန်ပေးနိုင်သလောက် ဖတ်လို့ရပါတယ်။
Related Article >>> သင့်သွေးဖြင့် အသက်ကယ်ပါ။
ဗဟိုလမ်း ၊ ခဝဲခြံမှတ်တိုင် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ၊ရန်ကုန်
စလင်းကွင်းကျောင်းရှေ့၊ စလင်းကွင်း မှတ်တိုင် ၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်
တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆို အခြားသော မျက်မမြင်ကျောင်းတွေလည်း အများကြီးရှိအုံးမှာပါ။ ယောင်းတို့သိထားတဲ့ တစ်ခြားဒေသမှာရှိတဲ့ကျောင်း လိပ်စာတွေကိုလည်း မျှဝေပေးလို့ရပါတယ်နော်။
လိုအပ်နေတာတွေတော့ အများကြီးပါ။ အချိန်အနည်းငယ်ပဲ ပေးနိုင်သူတွေကတော့ အသံလှူပေါ့ တစ်ခြားလိုအပ်တာတွေ ထပ်လုပ်မယ့် အစီအစဉ်တွေကို ကျောင်းတာဝန်ခံတွေက သေချာရှင်းပြပါတယ်။ ထမင်းလှူတာ အဝတ်အစားလှူတာ ၊ ကလေးတွေကို စာသင်ပေးတဲ့အပိုင်းတွေ ၊ သီချင်းဆိုရတဲ့အစီအစဉ် ၊ ပွဲတွေရှိရင် volunteer အနေနဲ့ ကူလို့ရမယ့် အစီစဉ်တွေကို အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးပါတယ်။
ဘာသာရေးတွေ မပါဘဲ ပြောရမယ်ဆိုရင်တောင် လူသားပီပီ ပီတိတော့ ဖြစ်ရပါတယ်။ ကိုယ်က စိတ်ရှုပ်နေတာဖြစ်ဖြစ် ၊ စိတ်ဓာတ်ကျနေတာဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်အခက်အခဲဟာ သူတို့ဘဝနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင် ရယ်စရာတစ်ခုပါပဲ။ ကြံဖန်ပြီး မျက်မမြင်ကလေးတွေကို တစ်ဆင့်နိမ့်အတွေးနဲ့ ကြည့်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ကြည့်စရာအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူး သနားစရာလည်း မလိုပါဘူး။ သူတို့ဟာလည်း မသန်ပေမယ့် စွမ်းကြတဲ့ သူတွေပဲမဟုတ်လား? ကိုယ်ကူညီလိုက်လို့ လူသားတစ်ယောက် တစ်ဖက်သားအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတဲ့ ကိုယ့်ပီတိကို မြင်စေချင်တာပါ။ ခံစားစေချင်တာပါ။ တစ်ဘက်သား ကိုယ့်ကြောင့် အဆင်ပြေသွားတယ် အကျိုးဖြစ်ထွန်းသွားတယ်ဆို တဲ့ ပီတိ ဝမ်းသာစိတ်က ဘာနဲ့မှ နှိုင်းယှဉ်လို့ မရဘူး မဟုတ်လား။
ဒါကြောင့် တစ်ရက်ပဲအားသည်ဖြစ်စေ၊ မွေးနေ့မှာ အလှူလုပ်ချင်တာဖြစ်စေ၊ ကိုယ့်ဘက်က အချိန်အနည်းငယ်ပဲ ပေးနိုင်ခဲ့လို့ ဖြစ်စေ ဒီလို အသံလှူလို့ရတဲ့နေရာတွေရှိနေပါ တယ်လို့ လက်တို့ပါရစေ။ သူငယ်ချင်း အစုလိုက်ကြီး သွားပြီးလည်း လှူလို့ရတာမို့ ပရဟိတအဖွဲ့လိုလေးလည်း ဖြစ်သွားတာပေါ့။ ကဲ.. ယောင်းတို့သိထားတဲ့ တခြားကူညီနိုင်မယ့်သူတွေကိုလည်း လက်တို့ပြီး ပြောပြလိုက်ကြဦးနော်…
Tagged Knowledge, Letters from Heart
Friendship Knowledge Motivation Relationships
စိတ်ဓာတ်စစ်မှန်သူတွေရဲ့ ဝိသေသလက္ခဏာ (၁၁)မျိုး
Posted on August 17, 2017 April 18, 2018 Author Christina Rosy
ကလေးတွေလို စစ်မှန်တဲ့သူတွေ ဒီလောကကြီးမှာရှိတယ်နော်ယောင်းတို့။ သူတို့ရဲ့အကျင့်ကောင်းလေးတွေကို အက်ဒမင်တို့ယောင်းတို့ အတုယူကြရအောင်။
Her Club ရဲ့ နောက်ကွယ်
Posted on September 26, 2017 November 1, 2017 Author Nilar
ဒီ Club လေးဖြစ်လာဖို့ အက်ဒ်မင်တို့ ဘယ်လောက်ထိ ခေါင်းခဲခဲ့ရတယ်ဆိုတာ….
Posted on May 3, 2018 July 25, 2018 Author Aye Mon Kyaw
အူအတက်လေးထဲ အစာတွေ မတော်တဆဝင်သွားတဲ့အခါ ပြန်ထွက်ဖို့ လမ်းမရှိတာမို့ ပိတ်မိနေတတ်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ အူအတက်ရောင်တာ ဖြစ်လာပါတယ်